आँखाको नानी संकलन केन्द्र सञ्चालनमा
समाज 20 पटक पढिएको
हेटौंडा, २९ माघ÷ हेटौंडा सामुदायिक आँखा अस्पतालले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा आँखाको नानी संकलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । सोमबार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हरिबोल महतले केन्द्र उदघाटन गरेका थिए ।
आँखा अस्पतालले गरेको कामहरु उत्कृष्ट रहेको र त्यसमा यो संकलन केन्द्रको कामले अझ थप सुविधा पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. रिता गुरुड्डले तिलगंगामा यो सेवा शुरु गर्दा धेरै कठिनाइहरु आएको र पछि सबैले यसको महत्व बुझेपछि अहिले विश्वस्तरमा समेत परिचित भएको बताइन् । सम्पूर्ण सामाजिक संघसंस्थाहरुको तर्फबाट लायन्स क्लब अफ हेटौंडाका राम श्रेष्ठले सेवाको प्रचारप्रसार गर्न सम्पूर्ण सामाजिक संघसंस्थाहरु लागिपर्ने धारणा राखेका थिए ।
मानिसको मृत्युपश्चात् जलेर खरानी हुने आँखाको नानी दान गरी दृष्टिविहिनहरुलाई दृष्टि प्रदान गर्न सकिन्छ । आँखाको नानीको खराबीको कारण दुवै आँखा नदेखेर बसेकाहरुको आँखामा नानी प्रत्यारोपणपश्चात् धेरै जनाले दृष्टि प्राप्त गरी सकेका हेटौडा सामुदायिक आँखा अस्पतालका नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. मलिता अमात्यले बताइन् ।
तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानमा स्थापति आँखा बैंकमा आँखा दान गरीएका व्यक्तिहरुबाट संकलन गरिएका आँखाहरु देश विदेशहरुबाट समेत माग हुने
2419010	Times Visited.